Ny angano diso momba ny tongolo ao amin'ny sakafon'ilay alika | Alika Manerantany
Ny angano diso momba ny tongolo ao amin'ny sakafon'ilay alika
Isan'andro aho dia namaky lahatsoratra tamin'ny Internet isan-karazany izay miresaka momba ny famahanana ny alika. Ao anatin'ireny fidirana ireny dia mamaky aho indraindray lesoka marina momba ny famahanana ny alikanay, izay hovahako tsikelikely eto. Tokony hazavao amin'ny olona ny hevitrao ary aza avela hitombo hatrany ny angano diso. Ary tsy zavatra mora izany.
Izy io dia zavatra mora lazaina kokoa noho ny tokony hatao, satria feno Internet ny Internet izay adika amin'ny bilaogy iray mankany amin'ny iray hafa, nefa tsy nanova ny soratra im-betsaka akory. Porofon'izany ny lohahevitr'ity lahatsoratra ity. Avelako ianao raha tsy misy bebe kokoa Ny angano diso momba ny tongolo ao amin'ny sakafon'ilay alika.
Iray amin'ireo olana atrehinay rehefa mamaha an'io fikorontanan'ny angano diso io izay noforonina manodidina ny fomba hamahanana ny alikantsika, Ny zava-misy fa ny marika fahanana dia nanondraka vaovao maloto amin'ny mpanjifa amin'ny fomba rehetra, ary niafara tamin'ny fametrahana andian-angano an-tanàn-dehibe (Tsy hitako ny fomba tsara kokoa hamaritana azy ireo) izay averimberina amin'ny medium iray hafa, tsy misy mifanipaka amin'izy ireo. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, ao amin'ny Tantaran'ny indostrian'ny sakafon'ny biby, Azavaiko ny fomba fiasan'ny indostria mamorona sakafo ho an'ny bibintsika. Aza adino izany.
Raha ny resaka ifotony dia namaky in-jato aho, amina lahatsoratra an-jatony, tao amin'ny bilaogy samihafa an-jatony, fa ny tongolo dia zavatra mitovy amin'ny poizina mahafaty ho an'ny alika.
Alika iray manodidina ny 30 kilao, dia tsy maintsy mihinana bebe kokoa na latsaka, 1% amin'ny lanjany amin'ny tongolo mba hahatsapany ho ratsy. Midika izany fa tokony homena tongolo 300 grama ny alika mba hahafaty azy.
Misy olana ve ny alikako mihinana vary izay ananako, manana tongolo? Tsia tsy izany mihitsy. Araka ny nolazaiko Paracelsus: Tsy misy poizina, poizina ny zava-drehetra: ao anaty fatra ny fanontaniana.
Ny fanomezana ny alika tongolo vitsivitsy amin'ny sakafony dia zavatra iray izay tsy ho ratsy, satria hanome anao otrikaina mahasalama sy voajanahary ianao, ary etsy ankilany, saika tsy azo ihodivirana izany raha omentsika azy ny ambiny indraindray.
Miarahaba ary raha manana fanontaniana ianao dia anontanio ahy ny hevitr'ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Ny angano diso momba ny tongolo ao amin'ny sakafon'ilay alika
Hetsiky ny sofina alika: inona no dikan'izy ireo?